Enwere Ọtụtụ Ime ụlọ ... | Martech Zone
Enwere ọtụtụ ụlọ…
Sunday, June 1, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Enwere ohere zuru oke maka ihe niile Chineke kere eke. N’akụkụ aka nri nduku., nke ebudatara site na dullhunk.
My papa zitere m nke a site na email ma ọ bụ naanị ọchị karịa ịghara ịkekọrịta.
Nke a bụ mgbasa ozi maka Klọ oriri na ọkụ Sasụ Saskatoon, Greenville, South Carolina, ma enwere ike zụrụ dị ka T-Shirt.
Ana m anwale atụmatụ Flickr 'Blog nke foto a'. Ọ bụ ezigbo mma mma ebe ị nwere ike ịmepụta template layout na biputere ihe oyiyi na a blog post ozugbo gị blog si ha interface iji gị blog mpụga ikenye atụmatụ. Oge izizi zipuru ya, ọ sịrị na ọ 'dara' na 'Gbalịa ọzọ'. N'ezie, ọ daabeghị, yabụ kpachara anya ma ọ bụrụ na ị chọpụta nke ahụ!
Nke ahụ bụ otu njirimara m na-eji biputere njikọ m kwa ụbọchị site na Del.icio.us.
Wildcard DNS na Dynamic Subdomains
Apple na-enweta ndetu site na Microsoft?
Jun 3, 2008 na 9:50 AM
Lee ezigbo nlebara anya. Ahụla m mgbasa ozi yiri nke ahụ maka ụlọ ndị a na-eme mgbe niile na-achị m ọchị (n'ụdị ụzọ ikpe mara).